मलाइ फसाएर जन्ता लाइ अन्धकारमा राख्न दलेहरु जागे सबैले सेयर गरेर साथ दिन आग्रह गर्दै भने भ्रष्टचार प्रमाणित भए झुण्डिएर मर्छु : कुलमान
काठमाडौं. नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चरम भ्रष्टचार भएको नेकपाका सांसद अमनलाल मोदीले आरोप लगाएका छन्. मंगलबार संघिय संसद अन्तर्गतको लेखासमितिको बैठकमा उनले्यस आरोप लगाएका हुन्. उनले कुलमान घिसिङलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग तुलना गर्दै लोडसेडिङ हटाएकोमा कुलमान घिसिङसँग घमण्ड पलाएको उल्लेख गरे. लोडसेडिङ हटाउनुमा घिसिङ एक्लैको हात नभएको भन्दै यसमा मन्त्री सचिव लगायत प्राधिकरणमा कर्मचारीको पनि भूमिका रहेको बताएका छन्. ‘लोडसेडिङ त्त गर्दा उहाँको मात्रै हैन कि त्यत्ति बेलाको मन्त्री एक्लैको भन्दा पनि सबै टीमको थियो.
यो पनि हेर्नुहोस :- कुलमानको चुनौती : भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए झुण्डिएर मर्न तयार छु…